Date My Pet » 5 Fomba Tsy Mba ho Tech Mahantra
amin'ny Erica manome fitoerana
Last nohavaozina: Sep. 12 2020 | 2 min namaky
Talohan'ny andron'i caller ID, haino aman-jery ara-tsosialy ny SMS sy mijoko anao afaka soa aman-tsara ny lehilahy iray dial (na ny ankizivavy ny) isa hatrany hatrany mandra-pahafaky ny rantsan-tananareo lasa numb tsy maika ny bokotra. Noho ny zava-mahagaga ny teknolojia maoderina manambara-piaro, mahita ny anaranao sy ny maro avy hatrany ny mpianatr'i miseho efitra efa-, in-dimy na mihoatra ny indray andro dia tanteraka Mamono. Toy izany koa ny andinin-teny mandeha, haino aman-jery ara-tsosialy mailaka sy hafatra. Tsy azo inoana fa teJohnDoe hamaky ny fihobiana avy bitsika izay nolazainy ny amin'ny ora ora rehetra, na rehefa mahazo teny lahatsoratra manontany tena toerana misy anao sy izay ataonao. Izany no mitovy amin'ny teknolojia nanaraka azy manodidina, peaking foana ny an-tsorony.
Raha ny overdependence eo amin'ny mpiara-miasa avy nivoaka ho overdependence amin'ny teknolojia, manapaka ny mifikitra sy handroso ho amin'ny asa iray izay tsy tafiditra SMS, nibitsika, hafatra na raha tsy izany dia nanaraka azy an-tserasera.
Hit ny fanaovana fanatanjahan-tena. Toy ny olana madinidinika eo ianao boribory lavalava miakatra sy midina, ny fahaizana na ny lahatsoratra dial handeha amin'ny miavaka amin'ny misavoritaka. Raha tsy mandefa SMS drafitra amin'ny zavatra izay tonga toy ny, "T Hu W? Wgats ny "ianao dia tsy azo inoana fa mba misisika be sy miezaka manao nifandray mandritra ny workout. Amin'ny maha-Bonus maneho koa afaka manampy anao haka aina sy de-tsaina, fanaovana fa ilaina ny malahelo mandeha downhill. Raha toa ka tsy manana fanaovana fanatanjahan-tena mpikambana, tsy lany ka mahazo iray fotsiny mba hiala eo amin'ny fitondran-tena sahirana. Raiso ny alika avy an-tongotra, mandeha ho jog manodidina ny manodidina, na ny bisikileta nandona eo an-toerana lalan zaridaina. Ny zavatra manan-danja mba hahatsiaro: Ilaozy ny sela ao an-trano, na eo amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena fitoeran'entan'ny mpianatra ny. Raha toa ka tsy manana izany, tsy afaka mampiasa izany.
Antsoy olon-kafa. Anarana iray ny palitaony namana toy ny voatendry caller. Rehefa ianao hanao ny faharoa na fahatelo antso lahatsoratra, ianao dia mbola afaka naka ny finday - raha mbola ny olona amin'ny farany hafa tsy ny lehilahy na ny vehivavy. Aoka ny namanao miresaka anareo hidina, fampahatsiarovana anao fa manana be dia be ny olona eo amin 'ny Fiainana, mba ho anao orinasa.
Tsy an-tserasera stalk. Raha hitranga mijery ny Facebook pejy vitsivitsy fotoana be loatra, Mety ho tsy maintsy ho fantany raha tsy manao mazava be. Raha tena matoky azy, tsy misy antony hijery leo azy izy 20 fotoana isan'andro. Sady koa anie, dia marani-tsaina loatra angamba ny hamoaka pics ny tenany sy ny ankizivavy iray hafa, rehefa fantany fa afaka nahita izany. Raha tsy hoe marani-tsaina, nahoana ianareo no niaraka taminy ihany? Raha hitranga mba hisamborana olona iray be loatra momba ny fiainana ara-tsosialy ny haino aman-jery ny pejy, tsy tapaka Posts. Izy, sy ny namany, Tsy mila mahafantatra ianao fa ny pejy isaky ny dimy minitra.
Mandehana amin'ny sela sabbatical. Raha manomboka ianao mba hamela ny mifikitra aminao miditra ny, mametraka ny efitra ho fitsaharana ho an'ny andro iray. Na dia toa toy ny ho tanteraka velively izany, ny olombelona no mitondra amin'ny telefaonina entin-tanana ela be talohan'ny ve dia mba ho. Miala ny findainao eny, nataony tao amin'ny vatasarihana ary manao drafitra miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana ho an'ny andro manontolo.
Hit ny tanàna. Drafitra takariva avy amin'ny namana. Raha sahirana ianao fisakafoana, mandihy na mijery horonantsary malaza ireny ny farany flick, dia tsy ho dialing ambony ny fitiavana, na SMS azy mitsahatra. Raha manao izany ianao mahita ny tena peaking amin'ny finday, faniriana ny hahazo andinin-teny ao amin'ny haingana raha namanao mitady ny fomba hafa, mianjerà indray ho ao an-ankehitriny.
5 Antony Nahoana Breakfast Dates Voalohany ve Brilliant